Njem nleta Middle East
Oman nwere akụkọ ọgaranya na nke na-adọrọ mmasị, nke jikọtara ya na mmeri na-adịgide adịgide. A na-echekwa ebe a dị iche iche nke ihe owuwu ụlọ, nke e wukwasịrị na Emepechabeghị Anya iji chebe steeti site na ndị Portuguese na ndị Peasia. Ndị a ewusiri ike na-ejupụta na mgbe ebighị ebi na-ekwu banyere oge dị iche iche nke mba.
Ulo elu nke Oman
Na mpaghara nke steeti e nwere ihe karịrị ụlọ elu 500. Ụfọdụ n'ime ha bụ mkpọmkpọ ebe, ndị ọzọ bụ ụlọ ngosi ihe mgbe ochie akụkọ ihe mere eme, ndị ọzọ edepụtara dị ka ebe UNESCO Heritage Site. A na-ewu ebe niile ewusiri ike dị iche iche n'ụdị ụlọ ndị dị iche iche ma nwee ihe ụtọ ha. Oman kachasị amara nke Oman bụ:
Sohar - e wuru ya na narị afọ nke anọ, ma na narị afọ nke 16, ndị Portuguese wughachiri ya. Nke a bụ nanị ebe e wusiri ike na mba ahụ, na-enwe nkume ntọala nke agba ọcha. A na-eme ebe ahụ siri ike n'ogologo ma na-agba gburugburu mgbidi dị elu na ụlọ elu isii. Enwere uzo di omimi nke naeduga ndagwurugwu nke ugwu Aldze, ogologo ya di kilomita 10. Taa, e nwere ụlọ ihe ngosi nka na ókèala nke ụlọ elu ahụ na-akọ akụkọ ihe mere eme nke ndị bi n'ógbè ahụ. N'etiti ihe ngosi ndị a, a pụrụ ịmata map nke ụzọ ahia, ngwá ọrụ ụgbọ mmiri, ego ochie, ngwá agha, wdg.
Rustak - n'oge gara aga isi obodo Oman dị ebe a. Ndị Peshia guzobere ebe ahụ siri ike na 1250, e mechara weghachi ya ma gbanwee ọtụtụ ugboro. Ụdị ikpeazụ nke ụlọ ahụ nwetara na narị afọ nke 17. E wuru ụlọ elu ikpeazụ na 1744 na 1906. Ebe e wusiri ike dị na nkume na-agba nkume nke e ji eme ihe maka owuwu. N'elu elu elu dị elu bụ nnukwu ụlọ elu Burj al-Jinn, nke na-enye echiche dị mma. Dị ka akụkọ si kwuo, ndị mmụọ ọjọọ kere ya. Ebe nkiri ndị dị nso bụ mmiri na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na baths ọha.
Mirani - ulo oru nke ndi Portuguese wuru na narị afọ nke iri na ise. Ọ dị na Muscat na bụ ihe onwunwe nke gọọmentị. N'ebe e wusiri ike e nwere ihe ngosi nka nke onwe. Naanị ndị ọbịa nke Sultan ka e kwere ka ịbanye ebe a. Ị nwere ike inyocha ụlọ site n'èzí. N'ihe dị iche iche anya, mmadụ nwere ike ịhụ graffiti oge ochie nke ndị agha na ndị ahịa na-ahapụ n'etiti narị afọ nke 19.
Al Jalali - nke siri ike nke bu Mirani zuru oke, ha bu umu ejima. Mgbidi a na-apụghị imeri emeri gbara ya gburugburu nakwa taa bụ isi agha. Nanị okporo ụzọ nke na-eduga na nnukwu ụlọ bụ staircase steepụ. Ọnụ ụzọ ebe a bụkwa otu, na nso ya ka edere akwụkwọ buru ibu, nke e mere na nkwụsị ọla edo. Ọ na-ede aha ndị ama ama ama nke ebe e wusiri ike.
Akwụkwọ bụ onye pirate fort, nke bụ ndị Portuguese filibusters. Taa, a gbahapụrụ ihe owuwu ahụ, ya mere a na-ebibi ụlọ na facade nke ụlọ ahụ.
Nahl - ebe siri ike, e wuru n'elu ugwu nke otu aha ahụ tupu oge Islam. A na-ele ya anya dị ka otu n'ime ọmarịcha mara mma na nke siri ike na mba. A na-eli ebe a na-egbuke egbuke nke nkwụ ndị gbara ya gburugburu. Ndị eze nke Al Bu Said dynasty na Yaarubi gbara ya ume wee mee ka ọ dị ike. Ndị na-ewu ụlọ na-eji atụmatụ nke ala dị na mpaghara na ike nke ala, ya mere mgbidi dị n'ime ya yiri ka ọ dị ala karịa n'èzí. A na-eji ihe ịchọ mma akpọrọ ihe chọọ mma windo, ọnụ ụzọ na ụlọ elu nke ụlọ elu ahụ.
Jabrin - a na-ekpuchi ebe siri ike na ọtụtụ ihe nzuzo na akụkọ ifo. Ewuro ya na narị afọ nke iri na asaa wee nwee usoro pụrụ iche nke ihe nzuzo na ọnyà. Ebe e wusiri ike bụ ebe a na-akụzi ihe, e weere ya na ọ kachasị mma na mba ahụ. E kewara ụlọ ahụ n'ime ụlọ ndị inyom na ndị nwoke, yana Majlis (Ụlọ Nzukọ Maka Board). Ime ime na-enwe mmasị na mma mma nke ọnụ ụzọ na windo, yana nke eserese elu ụlọ. Ọ na-arụ ili nke onye Imam, bụ onye nwụrụ n'oge Ọkachamara.
Al Hazma - e wuru ya na 1708 site n'usoro Sultan Bin Seif. Ihe kachasị mma nke ogige ahụ bụ 2 ụzọ echekwara echebe, nke nwere ihe osise na ihe ederede site na Koran. N'ime ụlọ elu ahụ, ndị ọbịa ga-enwe ike nyochaa ụlọ agha, ụlọ ndị dị n'ihu, mkpụrụ ndụ nke ndị mkpọrọ na ndị n'okporo ụzọ n'okporo ụzọ na nzuzo na-agafe ebe e wusiri ike.
Ewubere Nizwa Fort na njedebe nke narị afọ nke 17 site n'usoro iwu nke Imam Sultan bin Saif Jaarubia. A na-eji nnukwu ụlọ elu nke mba ahụ chọọ ya mma, site n'elu ya mepee ihe ngosi dị egwu nke obodo ahụ na nkwụ nkwụ. Ọzọkwa, e wusiri ebe ewusiri ike ike maka ọnụ ụzọ ya oge ochie, bụ nke a kwadoro na omenala Omani.
Bahla Fort dị nso na oasis dị iche iche ma bụrụ nke kachasị ochie nke mba ahụ. E bu n'uche maka oru agha na ọbụna taa, o nwere nnukwu akụkụ. Ndị bi na banu-nebhan wuru ebe siri ike na adobe na narị afọ nke 13. O nwere mgbidi dị kilomita iri abụọ na abụọ gbara obodo ahụ, 132 oghere na ọnụ ụzọ ámá 15. N'elu ụlọ isi atọ nke dị na ụlọ iri anọ na ise, a na-ese ụlọ ahụ n'onwe ya na ihe osise na osisi. E depụtara saịtị ahụ dị ka ebe UNESCO World Heritage Site.
Khasab dị n'ebe ugwu nke Musandam Peninsula. Site na windo nke ebe siri ike e nwere udo na nke mara mma banyere Strait of Hormuz. Ọtụtụ ndị ọbịa bịara ebe a iji hụ panorama a. Ụlọ ndị e wusiri ike nke ndị Portuguese malitere na narị afọ nke 17, ka ha wee nwee ike ịchịkwa ọrụ niile na mmiri. A họọrọ ebe ahụ nke ọma, n'ihi na n'ime ya enwere ugwu, ala ịkpa na ahịa. Citadel nwere nnukwu ụlọ elu na nnukwu ụlọ.
Taka bụ obere ebe e wusiri ike nke brik ụrọ, nke ya na ụlọ ya dị ka ụlọ nke ndị knights-crusaders. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ niile nke ụlọ ahụ nwere ala abụọ. N'ime ụlọ elu ahụ, ọnụ ụzọ osisi oge ochie, ihe nchebe, ụlọ nri ndị dị n'oge gara aga, ebe a na-eri ihe oriri, ụlọ mkpọrọ na ụlọ mkpọrọ maka ndị mkpọrọ nwere obere ụlọ dị iche iche. N'ebe a ị ga-ahụ efere ochie, uwe ejiji oge ochie, nnukwu nchịkọta ngwá agha na ihe ndị mmadụ na-eji eme ihe kwa ụbọchị.
Ụgbọ njem nke Saudi Arabia
Alakụba nke Oman
Nri nke UAE
Oman nke Oman
Ihe ịzụta na Oman?
Alakụba na UAE
Saudi Arabia - Njem nleta
Ụlọ nke Oman
Ugwu na UAE
Ulo ntụrụndụ na UAE
Ịgba ọgwụ maka njem na UAE
Gem na gelatin
Jeans skinnie - onye na-aga na ihe na-eyi na otú e si mepụta oyiyi fashionable?
Onye na-ere ihe na-ese siga
Egwuregwu maka ndị nọ n'afọ iri na ụma 16 afọ
Kedu ka esi eme ihe na akpa akwa?
Nsogbu a na-enwe na ahịhịa dị n'ubi a n'ụzọ dị ugbu a
Victoria Beckham na-akụziri nwa ya nwanyị ka ọ bịa
Skinali maka kichin
Kedu otu esi eme ka mmanya na-aba n'anya?
Gịnị kpatara crunches nke nkwonkwo?
Bursitis nke nkwonkwo ụkwụ - mgbaàmà na ọgwụgwọ
Ihe ngosi eji eme ihe n'ile ihe ... Pekingese
Nri jikọtara na mbara ihu
Ngwa ngwa salted cucumbers ke brine - uzommeputa
Ọkụ anwụrụ ọkụ
Gịnị bụ nrọ nke idei mmiri?
Anya mmiri anya mmiri
Ala maka ụda olu
Nri achicha na jam na margarine
Solyanka si kabeeji na multivarka